Stainless simbi bhaa
Stainless simbi sandara bhaa
Stainless simbi sikweya bhaa
Stainless simbi angled bhaa
Stainless simbi mugero bhaa
Stainless simbi Hexagon bhaa
Stainless simbi kumativi mutopota
Stainless simbi musono mutopota
Stainless simbi sikweya mutopota
Stainless simbi rirambe richibvira chubhu
Stainless simbi papepa
Stainless simbi inopenya waya
Stainless simbi chitubu waya
Stainless simbi duku waya
Stainless simbi nomoto waya
Stainless simbi waya tsvimbo
Stainless simbi Profile waya
Stainless simbi waya tambo
Chiwanikwa Nickle dzino
Magadzirirwo 2 53MA ndiro :
Magadzirirwo: ASTM A240 / ASME SA240
Upamhi: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc
Ukobvu: 0.3 mm kusvika 50 mm
Technology: Hot yakanyikwa ndiro (HR), Cold akakungurutsa jira (CR)
Pemvura Finish: 2b, 2D, BA, No.1, NO.4, NO.8, 8K, girazi, bvudzi mutsetse, jecha kwebhosvo, Brush, SATIN (Met pamwe Plastic Coated) etc.
Stainless Steel 253MA Sheets & Plates kunotsamira mamakisi:
STANDARD WERKSTOFF NR. EN izita jäsen
253MA Sheets, Plates Chemical Kuronga uye Mechanical zvivako (saky simbi):
giredha C Kr MN Si P S N Ce Fe Ni
0,040 Max 0,030 Max 0.14-0.20 0.03-0.08 musaridzwa 10.0-12.0
Tensile Strength Goho Strength (0.2% Kushaya) Elongation (muna 2.)
Sei Sarudzai Us:
1. Unogona kuwana zvinhu zvakakwana maererano nezvaidiwa yako kuvaduku zvichibvira mutengo.
2. Tinoratidzawo kupa Reworks, FOB, CFR, CIF, uye pamba nemba pakukurukura mitengo. We zano iwe kuita ngaakuitirei pakutumira mabhuku iyo ichava mari zvikuru.
3. Zvinhu tinorupa tiri zvachose verifiable, zvakanaka kubva mbishi zvokunyama bvunzo rugwaro kwokupedzisira ndeiya yakaita mutsara. (Reports acharatidza pamusoro zvinodiwa)
4. E vimbiso kupa mhinduro mukati 24hours (kazhinji muawa)
5. Unogona kuwana unganidza inotsiva, chigayo vazvo vane kurerutsa mukugadzira nguva.
6. Tiri zvakazara vakazvitsaurira kuna vatengi vedu. Kana musingadi zvinogoneka kusangana yenyu zvinodiwa pashure kuongorora zvokusarudza vose, isu hatingazvirumbidzi achikutsausai nokuchinja zvivimbiso zvenhema izvo achasika zvakanaka vatengi ukama.
SAKY Steel'S Quality Simbiso (kusanganisira Rokuparadza uye Non-Rokuparadza):
1. Visual divi Test
2. Mechanical mukamubvunzisisa akafanana tensile, Elongation uye rutapudzo kwenharaunda.
3. Impact ongororo
4. Chemical kuongororwa kuongorora
5. pokuoma bvunzo
6. Pitting kudzivirira bvunzo
8. Intergranular ngura Testing
1. Apex rakanyatsojeka kukosha kunyanya nyaya zvinyorwa dzakawanda umo consignment vanopfuura kuburikidza migero siyana kusvika pakupedzisira rwendo, saka tinoisa chinokosha hanya pamusoro kavha.
2. Saky Steel raMwari kurongedza zvinhu zvedu nenzira dzakawanda inobva zvigadzirwa. We kurongedza zvigadzirwa yedu vakawanda nzira, zvakadai sokuti,
The 253Ma chiwanikwa ane zvinotevera unhu:
253MA ari kupisa nemishonga austenitic Stainless simbi rakagadzirirwa mafomu yaida yakakwirira zvinokambaira simba uye yakanaka ngura nemishonga. Its uchishandisa tembiricha Range riri 850 ~ 1100 ° C.
Makemikari anoumba 253MA riri pakati nepakati, izvo zvinoita kuti simbi vane zvikuru rakakodzera nzwisisika ehupfumi munyika tembiricha siyana 850 ° C-1100 ° C, zvikuru yakakwirira oxidation nemishonga, uye pakafunuka kupisa kusvika 1150 ° C; zvikuru yakakwirira zvinokambaira nemishonga capacity uye zvinokambaira atsamwira simba; zvakanaka kuramba yakakwirira tembiricha ngura uye kuramba bhurasho ngura dzakawanda gaseous nhau; mukuru goho simba uye simba tensile panguva pamatunhu tembiricha; formability zvakanaka uye weldability Uye machinability zvakakwana.
Kuwedzera alloying zvinhu chromium uye nickel, 253MA Stainless simbi rinewo shoma pasi isingawanzowanikwi simbi (Rare Earth Metals, REM), izvo yekudyidzana anovandudza ayo antioxidant chinzvimbo. Nitrogen inowedzerwa kuvandudza zvinokambaira zvivako uye kuti simbi iyi austenite wakakwana. Kunyange zvazvo chromium uye nickel zviri zvinoitika pasi, ichi simbi Stainless ane zvakawanda zvakafanana yakakwirira tembiricha zvatariswa sezvo mukuru yakapambadzirwa chiwanikwa simbi uye nickel nemabhuku chiwanikwa.
253MA iri zvinowanzoshandiswa sintering zvokushandisa, Nokufema nevira midziyo, simbi utsotso, choto uye kuramba Kudzingwa midziyo achifinyamisa zvigayo (muchidziisa yamavira), kupisa kurapwa yamavira uye nenhumbi, chicherwa midziyo uye simende kugadzirwa michina.
Next: Stainless simbi rirambe richibvira chubhu
jäsen S31803 F51 Duplex Steel Round Bar